by कालिका टाईम्स ३१ भाद्र २०७८ १५:१२ 16 September 2021 0
नायिका करिना कपुरले १२ करोड पारिश्रमिक मागेपछि चलचित्र ‘सीता’को चर्चा चुलियो । यो चलचित्र ‘रामायण’मा आधारित रहेर बनाउने तयारी गरिएको छ । तर, करिनालाई चलचित्रको शिर्ष भूमिकाका लागि निर्माणपक्षले अफर गर्दा उनले महंगो रकम माग गरिन् । यसपछि, यो चलचित्रको निर्माणपक्षले अन्य नायिकाहरुसँग पनि कुरा अगाडि बढाएको थियो ।
यसैविच, चलचित्रका लागि नायिका कंगना रनोट फाइनल भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । चलचित्रका निर्देशक अलौकिक देसाइले यो खबरको पुष्टी गरेका छन् । उनले, सामाजिक संजालमा कंगनासँगको तस्वीर पोष्ट गरेका छन् ।
अलौकिकले लेखेका छन्–‘सीता आरम्भ, ब्रम्हाण्ड ती मानिसहरुको मद्दत गर्छन् जो विश्वासको साथमा समर्पित हुन्छन् । म सीताको भूमिकाका लागि कंगनालाई काम गराउन पाउँदा उत्साहित छु । यो पवित्र यात्राले हाम्रो पौराणिक कथालाई हेर्ने तरिका नै बदल्नेछ ।’
कंगनाले वास्तविक भारतीय महिलाहरुको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने निर्माणपक्षको भनाई छ । चलचित्रका लागि फाइनल भएपछि कंगनाकी बहिनी रंगोलीले १३ बर्षको उमेरमा कंगनाले सीताको भूमिका निर्वाह गरेको तस्वीर पोष्ट गरेकी छिन् ।
भाेजपुरी फिल्म “बिहार से काठमाडाैं” काे सुटिङ शुभारम्भ
कालिका टाईम्स १३ आश्विन २०७८ २३:०४ 29 September 2021
थारु गीत ‘ओ सजन’ बोलको गीत सार्वजनिक
कालिका टाईम्स ८ आश्विन २०७८ २३:०७ 24 September 2021
SQL requests:209. Generation time:2.207 sec. Memory consumption:17.51 mb